I-SEO: Yintoni ukuSebenzisa iiNjini zoKhangelo
NgoLwesine, uJuni 3, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndiyifunde nje kwi-Inc.com, iWordPress ilungiselelwe i-SEO. Ugh. Kuyacaphukisa ukuba indawo yolo mgangatho idlula kulwazi olungelulo ngolu hlobo.
I-WordPress ilungiselelwe ukuSebenzisa iiNjini zoPhando.
Andazi unjani Lungiselela ulungiselelo okanye nokuba kunokuthetha ntoni oko. Njengeqonga lolawulo lomxholo, iWindowsPress yenza ukuba isebenze kakuhle, kodwa ubukhulu becala ixhomekeke kuwe, kumxholo wakho weWindowsPress kunye neeplagi zakho zeWordPress ukuze wenze ngokupheleleyo indawo yakho yeWordPress okanye ibhlog.
Ngokombono wam othobekileyo, zine izinto ekuphuculeni ukusebenza kweinjini yokukhangela:
Ukwenza ukuba isebenze Eyona mikhwa ilungileyo ye-SEO yakho iqonga, njengeerobhothi.txt, iipali, kunye neemephu zesayithi zeXML. I-WordPress ayenzi nanye kwezi ngaphandle kwebhokisi… uyakufuna ukwenza ifayile yakho yeerobhothi.txt, vumela ukukhangela kwimithombo efanelekileyo, kwaye ungeze ivelisi yemephu.
Ukulungiselela umxholo wakho, uqinisekise izinto zekhasi zibekwe ngokufanelekileyo kwaye indawo ihlelwe ngokulandelelana, iqinisekisa ukuba amaphepha anyuselwa ngokuchanekileyo ngaphakathi. Uninzi lwabaqulunqi bemixholo abakuhoyi ukubaluleka kwezinto ezinje ngezihloko zamaphepha kunye nezihloko. Abanye bakha iphepha kwaye babeka umxholo wecala ngaphambi komxholo wephepha kulwakhiwo. Umxholo owenziwe kakuhle unokuphucula kakhulu indlela iinjini zokukhangela ziwujonga ngayo umxholo wakho kwaye ngawaphi amagama abawalathisa umxholo wakho. Uninzi lwamashishini luqala kwakhona iblogi kwaye ungacingi ngendlela yokuququzelela umxholo wabo ngokubanzi kunye nokuhamba kwabo. Oku kunokubangela imicimbi, ngakumbi ukuba unokhetho olubanzi lwamagama aphambili ekufuneka ujolise kuwo.
Ukulungiselela eyakho umxholo ngokusebenzisa i amagama owaziyo uya kutsala kwaye uguqule iindwendwe zibe ngabathengi kwindawo yakho. Oku kwenziwa njengenxalenye yempahla ebhloga ngokubanzi ziinkampani ezinje Isihlomelo, kodwa iWindowsPress iswele nayiphi na inkonzo okanye izixhobo zokwenza oku. Uya kudinga ukwenza uhlalutyo ngokwakho kwaye usebenzise isixhobo esinjengombhali ukunceda (Umbhali wevidiyo ye-WordPress yedemo).
Irony iyonke ye-SEO kukuba uninzi lwento oyenzayo kwindawo leyo ayichaphazeli indawo okuyo njengaleyo uyenzayo ngaphandle kwendawo. Ukubhala umxholo omnandi, ofanelekileyo ofumana ingqalelo (kunye ne-backlinks) yezinye iisayithi kunokufumana ukuba ubekwe kakuhle. Kodwa loo nto ayinanto yakwenza neWordPress kunye nokunye okunento yokwenza nendlela ophucula ngayo iiposti zebhlog yakho, dibanisa ibhlog yakho kwimidiya yoluntu, kwaye uyikhuthaze ngezimvo kunye nezinye iindlela. Ukuqonda apho unokuyinyusa khona ibhlog yakho kwaye uyikhuthaze ngokufanelekileyo kuya kwenza okungaphezulu kwinqanaba lakho lokukhangela ngaphandle kweqonga lakho!
Okokugqibela, i-SEO yile hayi isiganeko esinye, uluhlu lokutshekisha okanye iprojekthi. Kuba okhuphisana nabo (kunye nayo yonke i-Intanethi) ihlala itshintsha kwaye uGoogle uyaqhubeka nokulungelelanisa ii-algorithms zayo mihla le, inqanaba lakho liya kuqhubeka nokutshintsha. Ukubhalisa indawo yakho ngeGoogle Search Console, ii-Bing Webmasters kunye ne-Yahoo! Indawo yokuKhangela, ukujonga indawo ngezixhobo ezinjengeeLabhu zeGunya kunye Semrush yinkqubo eqhubekayo ekufuneka uyibandakanyile ukuqinisekisa ukuba ulungiselelwe ngokwenyani.
I-SEO yinkqubo yokubeka esweni inqanaba lakho kunye nokwenza uhlengahlengiso oluyimfuneko ukuqinisekisa ukuba umxholo wakho uyafumaneka kwaye ubekwe kakuhle kwimigaqo enceda ishishini lakho ukuba likhule.
Nantso ingcaciso yam!
tags: enjini yokukhangela nounUphando lwezoPhandoSEOyintoni leyo
INkonzo yabaThengi xa ithelekiswa neNkxaso yaBathengi
Juni 3, 2010 ngo-7: 36 PM
Wamkelekile kwakhona, DK!
Inyathelo elilandelayo: Thatha iFrance!
Ngaba uncede usinike umzekelo wokuba ungayazisa phi ibhlog yakho?
Juni 3, 2010 ngo-7: 58 PM
Ukuhlomla kwiibhloko zebhizinisi ezaziwayo yindlela elungileyo yokwandisa ukufikelela kweeblogi zakho. Ukudityaniswa nge-Twitter (kunye nee-hashtag), amaphepha e-Facebook nawe-Facebook (mema abahlobo bakho kwaye uqalise nentengiso ye-Facebook), kunye nokuhlaziya amanqanaba kwi-LinkedIn ngekhonkco elibuyela kwizithuba ziindlela ezilungileyo zokukhuthaza.
Juni 3, 2010 ngo-8: 04 PM
Ngaba uyangena kwezinye iinethiwekhi zemidiya yoluntu? Isikwidi? Reddit? Ukugqubeka kwi?
Juni 7, 2010 ngo-10: 00 PM
Isishwankathelo esigqwesileyo. Ukuba ndiva okanye ndibona "ukulungiswa kwe-SEO" elinye ixesha, ndiza kuphulukana nalo! Ndikhe ndaba neThesisi kwibhlog yam yabucala okwethutyana, kwaye iyawenza umsebenzi wayo (kodwa andiyithelekisanga nemixholo ekhuphisanayo). Uve izinto ezininzi ezintle malunga noMbhali, ke kuya kufuneka ndiyijonge ngoku ukuba uyicebisile. Ndiqala nje ukusebenzisa iRaven yokulandela umkhondo we-SERP (yenye yeentlobo zezilwanyana zasekhaya, yiza kuthi: Xa abantu bebhala "iziphumo ze-SERP") kwaye ndiyayithanda
Akukho nanye kwezi zinto igolide ye-SEO iyodwa. Akukho sisombululo silula, njengoko usitsho. Kufuneka sihlale ngaphezulu kwayo, sincedane xa kunokwenzeka, kwaye sicele izixhobo ezijongana nemiba esiyibonisayo.